WAAYIHII WARSAME Q34AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q34AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q34AAD
Warsame xabsigii ayaa lagu celiyay Gaduudowna saraakiishii xabsiga ayuu waydiiyay sababta ay ninkaan ku haysteen toban bilood bilaa maxkamad. Saraakiishii markii hore waxa ay damceen in ay hadallo been iyo xabsiga ayuu ku dhexdagaallamay Warsame ku eedeeyaan laakiin Gaduudow waa nin Kenya asaga oo ilmo yar yimid waxna ku bartay xiriirro badanna la leh maaamulayaasha Kenya. Waxa uu ugu hanjabay in saraakiishii in uu maxkamad la kori dooni haddii aysan Warsame si deg deg ah ku siin dayn ama maxkamadda dambiga ay ku haystaan caddayn u keeneen iyo sababta ay maxkamad u horgayn waayeen.
Ugu dambayn saraakiishii Guduudow runta ayay u sheegeen, waxa ayna ku yiraahdeen ninkaan cid naga wadata ayaan waynay ee dambi uu galay oo lagu haystaa ma jirto aan ka ahayn in uu dalka sharcidarro ku joogay taasna dambi wayn ma ahan oo malaayiin ayaa Kenya sharcidarro ku jooga. Xattaa haddii dawladdu sharcidarro in uu dalka ku joogo ku haysato waa ay tarxiili lahayd.”
Gaduudow waa uu ogaa in xabsiyada Kenya qofkii lagu xiro haddaan dadkiisu ka dabatagin uu halkaas isaga jirayo oo uusan jirin nidaam dawladeed oo isbadagal iyo isla xisaabsan ku dhisan. Dambilaha ugu khatarsan haddii uu leeyahay lacag ama dad u dooda xabsiyada Kenya habeen ama labo ka badan ku ma jiro halka miskiinka aan dambiga galin sanooyin badan xabsiyada ku jiro illaa waa looma ooyaane.
Gaduudow waxa uu Warsame u qabtay qareen kharashka qareenku qaatayna Faaiso ayaa soo dirtay. Qareenkii waxa uu maxkamadda geeyay qoraal uu kaga dalbanayo in Warsame si deg deg loo sii daayo maadaama uu toban bilood si aan sharci ahayn ku xirnaana magdhow dawladdu siiso. Xaakimkii maxkamaddu waxa uu Xeerilaalinta dawladda ka dalbaday in ay si deg deg Warsame maxkadda u horkeenaan dambiga uu galay ay soo caddeeyaan.
Maalintii xigtayba Warsame oo jeebbaysan maxkamadda ayaa la horkeenay waxaa la soo fariisiyay hoolkii maxkamadda Xeerilaalintuna maxkamadda ma aysan horkeenin dambi aan ahayn in uu dalka sharcidarro ku joogay.
Xeerilaalintu waxa ay maxkamadda ka codsatay in Warsame dalka laga tarxiilo. Looyarkii Warsame waxa uu maxkamadda u sheegay in Warsame aan lagu xirin dalka oo uu sharcidarro ku joogay waayo haddii uu dalka sharcidarro mar hore ayay dalka ka tarxiili lahayd. Looyarku waxa kale oo maxkamadda u sheegay in Warsame loo xiray gabar uu guursaday darteed amarka xarigga uu bixiyay gabadha aabbeheed Xaaji Doolaal askartana uu laaluushay.
Looyarku waxa kale oo uu Xaakimkii maxkamadda u sheegay in Warsame xaaskiisi Idil iyo wiil ayd dhashay intii uu Warsame xabsiga ku jiray ay xabsi guri ugu jiraan Xaaji Doolaal.
Xaakimkii maxkaddu waxa uu amray in Warsame xabsiga laga bixiyo oo saldhigga Boliiska lagu hayo inta maxkamaddu socoto. Waxa kale oo xaakimku amray in maalinta berri ah Idil iyo wiilkeeda iyo Xaaji Doolaal maxkadda la keeno si uu u waraysto.
Maxkamaddii maalintaas sidaas ayay ku xiran tahay waxaana loo ballamay maalinta berri ah.
Isla markii maxkamadda laga baxay Warsame waxaa la geeyay xabsiga Bangaani. Markii Warsame Bangaani la geeyay waxaa loo oggolaaday in uu taleefan isticmaali karo. Gaduudow ayaa inta suuqa aaday taleefan u soo gaday simcard-na u soo galiyay. Warsame waxa uu wacay Idil waxa ayna ahayd markii ugu horreysay oo ay isla hadlaan tan iyo subixii Boliisku Warsame guriga kala bexeen. Idil waxa ay Warsame u sheegtay in ay wiilka u bixisay Guuleed asna waxa uu ku yiri “waxaad u malaysaa in aad niyaddayda ogayd, waa magacaan u bixin lahaa.” Idil waxa kale oo ay Warsame u sheegtay in aabbeheed uu wali go’aankiisi ku adkaysanayo balse uu xalay xabsi gurigii ka qaaday. Waxa kale oo Idil u sheegtay Warsame in qoyska inta kale sida hooyo Caasho iyo carruurta walaaleheed ahi ay ayada la jiraan taasina ay xiriirkii qoyska iyo Xaaji Doolaal dhaawacday oo aabbe iyo hooyo uusan xiriirkoodu hadda fiicnayn.
Maalintii labaad ayaa maxkamadda la soo xaadiray, Xaaji Doolaal iyo Idil oo wiilkeedi dhabta ku sidata ayaa soo fariistay maxkamaddii wax yar kadib Warsame oo gacmaha ka katiinadaysan ayaa hoolka maxkamadda la soo galiyay. Uu hoolka soo galay waxa uu indhaha la raacay dadkii hoolka fadhiyay waxa uu na arkay Idil oo Guuleed dhabta ku haysa soona eegaysa waa uu u dhoollacaddeeyay ayaduna sidoo kale.
Xaakimkii markii uu maxkamaddii furay waxa uu hadalkii siiyay Warsame u na sheego in uu haysto 5 daqiiqo. Warsame inta uu istaagay asaga oo labada gacmood katiinadi uga xiran tahay ayuu yiri “xurmadle Xaakim muddo toban bilood oo aan xaqdarro ku xirnaa maanta waa markii ugu horreysay oo aan muuqeeda arko xaaskayga aan jeclahay Idil iyo wiilkayga Guuleed oo intii aan xirnaa dhashay, waxaan maxkamadda ka codsanayaa in la ii oggolaado in aan salaamo xaaskayga iyo wiilka.” Xaakimkii waxa uu Idil ku armay in ay soo istaagto oo Warsame u timaaddo. Idil oo farxad iyo naxdin ay laabteeda ku kulmeen ayaa inta soo dhaqaaqday Warsame u timid oo ayada oo Guuleed dhabta ku haysa Warsame labada daan ka shumisay. Warsame inkasta oo uusan gacmihiisa Guuleed ku qaban karin haddana inta uu soo foorarsaday ayuu Guuleed oo Idil dhabta ku hayso shumiyay kadib na Idil booskeedi ayay ku soo laabatay.
Xaakimkii waxa uu Idil waydiiyay sidii Warsame loo xiray iyo in ay run tahay in ayadu ay aabbeheed xabsi guri ugu jirto. Idil waxa ay Xaakimka u sheegtay sidii Warsame loo xiray waxa ayse la warwareegtay in ay aabbeheed xabsi guri ugu jirto. Intaas kadib Xaakimkii waxa uu hadalkii siiyay Xaaji Doolaal. Xaaji Doolaal waxa uu sheegay in Warsame gabadhiisa guursaday idan la’aan taasina ay ka soo horjeeddo sharciga Islaamka waxa uu se beeniyay in uu asagu Warsame xariggiisa ka dambeeyay iyo in uu Idil xabsi guri galiyay.
Intaas kadib waxaa hadalkii qaatay Looyarkii Warsame waxa uu na ku dooday in sharciga Kenya Warsame iyo Idil ay isguursan karaan ayaga oo aan oggolaansho ka helin waalidkood amase qof kale. Intaas kadib Xaakimkii maxkamaddii waa uu xiray waxa uu na armay in berri la isku soo laabto.
Maalintii saddexaad ayaaa maxkamaddii la isugu yimid Idil oo Guuleed sidata hoolka ayay soo xaadirtay si ay u dhagaysato xukunka ninkeeda lagu ridi doono. Xaaji Doolaal ma imaan.
Xaakimkii waxa uu akhriyay go’aanka maxkamadda waxa uu na yiri “maxkamadda sharafta leh markii ay dhagaysatay dacwadda Xeerilaalintu Warsame Faarax ku soo oogtay ee ah in uu dalka dalka sharcidarro ku joogay waxa ay maxkamaddu Warsame ku xukuntay in Warsame Faarax dalka laga tarxiilo. Sidoo kale maxkamaddu markii ay dhagaysatay eedaha uu Looyarka Warsame ku soo oogay Xaaji Doolaal ee ah in uu Boliiska laaluushay si ay Warsame u xiraan iyo in uu gabdhiisa Idil xabsi guri galiyay waxa ay maxkamaddu go’aamisay in kiiskaas ay daaqadda ka tuurto maadaama aysan wax caddayn ahayn. Maxkamadduna waa xiran tahay.”